को हुन् राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ? - Naya Patrika
को हुन् राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ?
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रियसभाको आज संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको बैठकले तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाका ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले अध्यक्ष पदमा तिमिल्सिना निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्। त्यसअघि उनका प्रस्तावक खिमलाल भट्टराईले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने उक्त प्रस्तावको समर्थक सुमनराज प्याकुरेल र दिनानाथ शर्माले समर्थन गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको अन्तरिम कार्यविधि २०७४ को दफा ७ बमोजिम राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन आगामी चैत ४ गतेका लागि तोकिएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी चैत २ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।
को हुन् तिमल्सिना ?
पर्वतका तिमल्सिना ०३६ सालको विद्यार्थी राजनीतिबाट पूर्णकालीन पार्टी राजनीतिमा लागेका हुन् । उनी ०३६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको युवा संगठन रेडगार्ड स्क्वायडको सचिवमा चुनिए । ०३७ सालमा अनेरास्ववियुको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कमिटीको सदस्य भएका तिमल्सिनाले ०४० सालमा नेकपा मालेको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए ।
०४१ सालमा उनी पोखरास्थित पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सचिवमा निर्वाचित भए । ०४२ देखि ०४६ साउनसम्म उनी जेल परे । उनले पोखरा, तौलिहवा, भैरहवा, वीरगन्ज र काठमाडौंको नख्खु तथा भद्रगोल जेलमा चार वर्ष बिताए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र तिमल्सिना पोखरामा झन्डै ६ महिना सँगै जेल बसेका थिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा उनी जेलमुक्त भइसकेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई पार्टीले पर्वतमा खटायो । त्यहाँ उनको नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले उनको टाउकोको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । उनी पार्टीको निर्देशनमा मुस्ताङमा पनि खटिए । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पर्वतमा गाविस अध्यक्ष भएर जिविस सभापतिमा निर्वाचित भए । त्यसअघि ०४७ सालमा केपी ओली नेतृत्वमा गठित युवा संघ नेपालको सदस्य हुँदै उनी सचिवसम्म भए ।
०५४ सालमा नेपालगन्ज महाधिवेशनबाट उनी वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य बने । जनकपुरमा सम्पन्न सातौ महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सल्लाहकारमा मनोनीत भए । बुटवलको आठौँ महाधिवेशन र काठमाडौंमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रिय सदस्य भए । हाल उनी एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य छन् ।